बालबालिकामा कोरोना संक्रमण उच्च
काठमाडौँ – कोभिडको तेस्रो लहर सुरु भएसँगै बालबालिकामा अत्यधिक मात्रामा संक्रमण देखिन थालेको छ । खोपको दायराभन्दा बााहिर रहेका १२ वर्षमुनिका बालबालिकामा संक्रमणको जोखिम बढी देखिएको छ ।
परिवारमा वयस्क सदस्य संक्रमित भएको अवस्थामा बालबालिकालाई बेग्लै राख्न सम्भव नहुने हुँदा वास्तविक संक्रमित निकै धेरै हुन सक्ने डा. पौडेलको भनाइ छ । बालबालिकाले आफ्नो समस्या प्रस्टसँग भन्न नसक्ने हुँदा स्वास्थ्यमा जटिलता देखिने जोखिम अत्यधिक रहन्छ । अघिल्ला लहरमा जस्तो यस पटक गम्भीर समस्या विरलै देखिएकाले पनि परीक्षण कम भइरहेको हुन सक्ने डा. पौडेलको आकलन छ । ‘हामीले भने पनि परीक्षण धेरैजसोले गराउँदैनन्, यसपालि निमोनिया जस्तो धेरै गम्भीर अवस्था नदेखिएकाले परीक्षण नगराएका हुन् कि रु’ उनले भने ।
मुलुकको एक मात्र केन्द्रीयस्तरको कान्ति बाल अस्पतालमा समेत डेढ सातादेखि कोभिड जस्तो लक्षण लिएर आउने बालबालिकाको संख्यामा वृद्घि भएको छ । हाल कोभिड संक्रमित १२ बालबालिकाको उपचार भइरहेको कान्तिका निर्देशक डा। अजित रायमाझीले बताए । ‘तेस्रो लहरमा हालसम्म एक जना पनि भेन्टिलेटरमा छैनन् तर पछिल्लो दिनमा कोभिड संक्रमित बालबालिकाको संख्यामा वृद्धि भएको छ,’ उनले भने ।
धनगढीस्थित सेती प्रादेशिक अस्पतालका मेडिसिन विभाग प्रमुख डा। शेरबहादुर कमर दोस्रो लहरको दाँजोमा अहिले बालबालिकामा पनि संक्रमण बढेको बताउँछन् । ‘लक्षण देखिएका बालबालिकाको परीक्षण गर्दा धेरैमा संक्रमण देखिएको छ,’ उनले भने । शुक्रराज ट्रपिकल तथा सरुवा रोग अस्पताल टेकुका डा। शेरबहादुर पुनका अनुसार कोभिडले १२ वर्षमुनिका बालबालिकामा हनहन्ती ज्वरो आउने, जीउ र घाँटी दुख्ने, पखालालगायतका लक्षण देखिएको छ । ‘१२ वर्षमुनिका बालबालिकाले खोप नपाएकाले अलि बढी पीडादायक संक्रमण देखिएको हो,’ उनले भने ।